Igwe nrụpụta ikuku rotary na -ewu ewu na ụlọ nrụpụta, osisi, ma ọ bụ ebe nrụpụta ọ bụla n'ihi okirikiri ọ na -agba. Ebe ụdị ikuku compressors ndị ọzọ nwere ike na-arụ ọrụ naanị maka ịgbanye/gbanyụọ okirikiri, ihe nkedo rotary na-akwụsị na-akwụsịghị elekere. Site na usoro okirikiri ọrụ dị 100%, ekwesighi imechi igwe nrụgharị ikuku rotary ma maliteghachi na ya ugboro ugboro.
Ọ bụrụhaala na igwe mpịakọta rotary na -agbada n'ụzọ ziri ezi, arụmọrụ ya dị elu karịa ọtụtụ ihe nrụpụta ikuku ndị ọzọ. Modelsdị kacha mma nke rotary screw compressor na -enyere ụlọ nrụpụta aka ịbawanye arụmọrụ n'ofe usoro mmepụta.
Nlereanya LPF-5 LPF-8 LPF-10 LPF-15 LPF-20 LPF-30 LPF-50 LPF-75 LPF-100 LPF-120 LPF-150 LPF-175
Ike moto KW 4.0 5.5 7.5 11 15 22 37 55 75 90 110 132
Ụdị ịnya ụgbọ ala A na-akwagharị eriri Belt na-akwagharị ozugbo Direct-akwagharị
Nrụgide Ogwe 7-10 7-12 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5
Ofufe ikuku m3/nkeji 0.6 0.8 1.0 1.7 2.4 3.6 6.6 10 12.5 15 19.8 23
Ọkwa mkpọtụ dB (A) 62 62 62 62 64 66 66 69 69 75 75 75
Tinyekwa Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp1 Rp1 1/2 Rp2 Rp2 Rp2 1/2 Rp2 1/2 DN80
Nha L (mm) 750 750 910 1170 1170 1250 1500 1780 1780 2000 2500 2500
Ibu n'arọ 170 180 195 310 350 420 580 1350 1500 2450 2500 2600
Ogo a pụrụ ịdabere na ya: A na -eji ikuku ikuku arụ ọrụ dị elu na teknụzụ Germany maka igwe nrụpụta rotary anyị. Ugboro abụọ ịghasa na nnukwu mkpọchi mechiri emechi na -eme ka igwe na -agba ọsọ na mkpọtụ dị ala na ogologo ndụ.
Mgbanwe gburugburu ebe obibi: Igwe nrụpụta ikuku anyị na -agbanwe ikuku na -eguzogide oke okpomọkụ na gburugburu ọrụ iru mmiri, a na -eji teknụzụ mbelata mkpọtụ maka sistemụ anyị, ọ dịghịkwa mkpa ntọala nrụnye pụrụ iche. Obere mpaghara zuru oke maka mgbasa ikuku kwesịrị ekwesị na mmezi igwe.
Ọrụ dị mfe & mmezi: PLC dị elu na -achịkwa igwe nrụpụta rotary anyị nke nwere ọrụ nchedo yana nchọpụta mmebi dị ike, a na -eme ihe ozugbo mgbe ọ chọpụtara mmejọ.
Ike na ịchekwa ego: Site n'ike ịhazigharị nrụpụta ikuku sitere na efu ruo pasent 100, ndị nrụpụta anyị na -arụ ọrụ nke ọma iji hụ na ịbelata ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na compressor anaghị eri ikuku mgbe ogologo oge gachara, ọ ga -emechi iji chekwaa ume ma belata ụgwọ ọrụ. Agbanyeghị, mgbe ikuku ikuku na -abawanye, ihe nrụpụta ga -amalite na akpaghị aka.
Nke gara aga: 3 Na 1 Integrated ịghasa Air Compressor kọmpat Unit na ịghasa Air Compressor, Air draya na Air tank
Osote: 1.0 M3/min ~ 12 M3/min Igwe nhicha ikuku friji nwere friji R410A maka sistemụ ikuku ikuku.
Ọkwa dị elu 0.75HP ~ 30HP Nkedo Iron Piston Air P ...
Energy-ịzọpụta Abụọ-ogbo mkpakọ ịghasa Air C ...